အာရှရှိအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (၂၀၁၁) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်порно
အာရှ J ကို Androl ။ 2011 ဇူလိုင်; 13 (4): 537-542 ။
2011 ဇွန်6အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1038 / aja.2010.135
ခရစ္စတိုဖာ CK ဟို, Praveen Singam, Goh က Eng ဟောင်ကောင်နှင့် Zulkifli Md Zainuddin
လိင်သည်အာရှလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အမြဲတစေတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအမျိုးသားများ၏လိင်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာများတိုးတက်လာခဲ့ပြီးလိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသနတွင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။ အာရှတိုက်ရှိ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ hypogonadism နှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုပျံ့နှံ့မှုနှင့်အနောက်နိုင်ငံများတွင်ဆင်တူသည်။ သို့သော်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယုံကြည်မှုများ၊ အသိပညာ၊ လိုက်နာမှုနှင့်ရိုးရာ / ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးရရှိနိုင်မှုအပါအ ၀ င်အာရှအမျိုးသားများအတွက်ပြissuesနာများစွာရှိသည်။ အာရှဒေသတွင်လိင်ဆေးပညာသည်နုပျိုနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ရှေ့တန်းသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးများဖြန့်ဖြူးရန်အစိုးရ၊ သက်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆေးသမားများနှင့်မီဒီယာများမှစုပေါင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလိုအပ်သည်။
keywords: အာရှ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ကျန်းမာရေး, hypogonadism, အထီး, အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်, လိင်
မကြာသေးမီအချိန်အထိအမျိုးသားများ၏လိင်ကျန်းမာရေးသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏စီမံကိန်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင်နောက်ကွယ်၌ ဦး တည်နေခဲ့သည်။ Viagra (sildanefil) သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်နေရာတွင်အမျိုးသားများ၏လိင်ကျန်းမာရေးအပေါ်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တံခါးပေါက်ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ယခင်ကတားမြစ်ထားသောအကြောင်းအရာသည်အာရှတွင်ပင်လူကြိုက်များသောအကြောင်းအရာတစ်ခုသို့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ရှေးရိုးစွဲလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အမျိုးသားလိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုကန ဦး တွင်အာရှတွင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုများနှင့်တွေ့ခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အနောက်တိုင်း၏ပွင့်လင်းသောယဉ်ကျေးမှုသည်လိင်ဆိုင်ရာဆေးပညာနယ်ပယ်တွင်သိသိသာသာတိုးတက်မှုများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအာရှရှိအမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးများကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်အာရှရှိအမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်စေရန်မဟာဗျူဟာများချမှတ်နိုင်ရန်အတွက်အာရှအမျိုးသားများအတွက်ထူးခြားသည့်ပြissuesနာများကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
စားပွဲတင် 1 အာရှတိုက်မှာအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုပြသသည်။
ED ကျေနပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခွင့်လုံလောက်ကြောင်းတစ်ခုစိုက်ထူမှီထိန်းသိမ်းနည်းဇွဲနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။1 အာရှတိုက်မှာ ED ၏ပျံ့နှံ့ 9% နှင့် 73% အကြားကွဲပြားခြားနားသည်။2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းအတွက်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအကဲဖြတ် (ဆိုလိုသည်မှာ Self-အစီရင်ခံသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း Erectile ၏ရာထူးအမည်ရမှတ်) နှင့်စစ်တမ်းအမျိုးအစားများ၏နည်းလမ်းမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဘာသာရပ်များကိုဆေးခန်းတစ်ခုမှခေါ်ယူစုဆောင်းပါကလူ ဦး ရေကိုရပ်ရွာလူထုမှစုဆောင်းသည့်အချိန်ထက်ပျံ့နှံ့နှုန်းပိုမိုမြင့်မားသည်။ အာရှအမျိုးသားများ၏သဘောထားများနှင့်ဘဝဖြစ်ရပ်များလေ့လာမှုတွင် ED ၏ပျံ့နှံ့မှုမှာ ၆.၄% ရှိသည်။2 တနည်းအားဖြင့်အသက် 20 နှစ်ပေါင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်ယောက်ျားမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုဆေးခန်းကနေစုဆောင်းခဲ့ကြနှင့်သူတို့၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း Erectile ၏ရာထူးအမည်ရမှတ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်, 32.2% ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုရရှိသောအခါကိုရီးယား, ၌တည်၏။3 ပြည်မကြီးတရုတ်မှာတော့ ED ၏အစီရင်ခံပျံ့နှံ့ 38.3% ဖြစ်ပါတယ်။4 သို့သော် 9% -17.7% ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုထိုင်ဝမ် (တရုတ်) တွင်ရရှိသောခဲ့သည်။5,6ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ, ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း 37.5% ဖြစ်ပါသည်,7 နှင့် 30 နှစ်ရှိပြီထက် သာ. ကြီးမြတ်ယောက်ျားအပေါ်စင်္ကာပူမှာကောက်ယူမယ့်လူဦးရေ-based စစ်တမ်းအတွက် 51.3% ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုရယူခဲ့ပါတယ်။8 စင်္ကာပူ၏အိုမင်းလူဦးရေအပေါ်အခြားလေ့လာမှုမှာပျံ့နှံ့မှုနှုန်း 73% ဖြစ်ခဲ့သည်။9 မလေးရှားပညာရေး၏ Self-အစီရင်ခံပျံ့နှံ့ 26.8% ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အခြားလေ့လာမှုမှာရရှိသောပျံ့နှံ့မှုနှုန်း 69% ဖြစ်ခဲ့သည်။10, 11
အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ကျယ်ပြန့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလေ့လာခဲ့သည်, သို့သော်အာရှကနေဒေတာတွေကိုကျဲဖြစ်ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းအမြဲသို့မဟုတ်နီးပါးအမြဲကြိုတင်အင်္ဂါဇာတ်ထိုးဖောက်မှု၏အကြောင်းကို 1 မိ, အားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးနီးပါးအင်္ဂါဇာတ်ထိုးဖောက်မှုနှင့်အနုတ်လက္ခဏာပေါ်သုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေးဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်သတ်မှတ်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောဒုက္ခဆင်းရဲ, နှောငျ့ယှကျ, စိတ်ပျက်နှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးများ၏ရှောင်ရှားခြင်းအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးဆက်များ။16 အဆိုပါ Global လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားလေ့လာမှုနှင့်အပြုအမူ 40 နိုင်ငံများရှိအဟောင်းလူကြီးများအသက် 80-29 နှစ်ပေါင်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအမျိုးမျိုးရှုထောင့်စစ်တမ်းကောက်ယူ။ အဆိုပါဖျောပွလေ့လာမှုမှာခြုံငုံပျံ့နှံ့မှုနှုန်း 30% ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အမြင့်ဆုံးနှုန်း (30.4%) အရှေ့တောင်အာရှတွင်ရယူခဲ့ပါတယ်။ ဤအ data တွေကိုအသုံးပြုခြင်း, အဖွဲ့ခွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအာရှယောက်ျားအပေါ်ကောက်ယူခဲ့ပါတယ်နှင့် 20% -32.7% ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုရယူခဲ့ပါတယ်။14, 17 ကျေးလက်နေပြည်မကြီးတရုတ်အတွက်ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုမှာပျံ့နှံ့မှုနှုန်း 19.5% ဖြစ်ခဲ့သည်။15 သို့သျောလညျး, မလေးရှားနှင့်ဟောင်ကောင် (တရုတ်) ထဲမှာ, ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းအသီးသီး 22.3% နှင့် 29.7% ဖြစ်ခဲ့သည်။18, 19 ထိုမှတပါး, ကိုရီးယားကောက်ယူလတ်တလောလေ့လာမှုထဲမှာ, Self-အစီရင်ခံပျံ့နှံ့မှုနှုန်း 27.5% ဖြစ်ခဲ့သည်။20
Hypogonadism သည်ယခင်က andropause၊ အိုမင်းနေသောအမျိုးသားအတွင်းရှိ Androgen Deficiency and Aging Male အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Androgen Deficiency အဖြစ်လူသိများသည့်လက်တွေ့နှင့်ဇီဝဓါတုဗေဒဆိုင်ရာအရာဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအန္ဒရိုလိုင်းဗေဒအသင်း၊ အိုမင်းခြင်းအမျိုးသားနှင့်ဥရောပဆီးလမ်းကြောင်းအသင်း၏လေ့လာမှုဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းတို့မှသဘောတူညီမှုကိုရရှိခဲ့ပြီး 'နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည့် hypogonadism' ဟူသောဝေါဟာရကို 'တိုးတက်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လက်တွေ့နှင့်ဇီဝဓါတုဗေဒ syndrome ရောဂါ' ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အသက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အခြားပုံမှန်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတစ် ဦး ချို့တဲ့ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ ဤအခြေအနေသည်ဘဝ၏အရည်အသွေးကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေပြီးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါစနစ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေနိုင်သည်။21 အနိမ့်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အဘို့အ Andrology, Urology တံခါးခုံ၏အိုမင်းခြင်းဟာအမျိုးသားနှင့်ဥရောပအစည်းအရုံး၏လေ့လာဘို့နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်း 8 nmol ဌဖြစ်ပါတယ်-1။ စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို 8-12 nmol ဌဖြစ်တဲ့အခါ-1အဆိုပါအခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို 180 pmol ဌထက်လျော့နည်းဖြစ်ရမည်-1 အနိမ့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။22 မေးခွန်းကိုလည်းရောဂါအတွက်အကူအညီရရှိနိုင်ကြသည်။ အဆိုပါအိုမင်းခြင်းဟာအမျိုးသားလက္ခဏာများဂိုးသွင်းသည်အိုမင်းခြင်းဟာအမျိုးသားရမှတ်နှင့်ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့သုတေသီတွေကအသုံးပြုမယ့်အတည်ပြုခုနစ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို tool ကိုအတွက်အန်ဒရိုဂျင် Deficiency အသုံးဝင်သောစိစစ် tools များဖြစ်ကြသည်။23 သို့သော်အိုမင်းခြင်းဟာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသားလက္ခဏာများအိုမင်းခြင်းဟာမေးခွန်းအတွက်အန်ဒရိုဂျင် Deficiency အနိမ့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်၏ဖြစ်ကြပြီးသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကောင်းစွာမပတျသကျဘူး။24 အာရှတွင် hypogonadism ပျံ့နှံ့မှု (စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်း <11 nmol l) ဟုသတ်မှတ်သည်-1) 18.2% -19.1% ဖြစ်ပါတယ်။25 အရှေ့အာရှအတွက်ကောက်ယူလေ့လာမှုများမှရရှိသောဒေတာများ hypogonadism ၏ပျံ့နှံ့ 7-47.7 နှစ်ရှိအသက်ယောက်ျားအတွက် 45% နှင့် 80% အကြားကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။23, 26, 27 မလေးရှားမှာတော့အဟောင်း 40 နှစ်အတွင်းအမျိုးသားများအတွက်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း 18.5% ဖြစ်ခဲ့သည်။28
နိုင်ငံအားလုံး၌ကျန်းမာသောလိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသည်လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးသောကိစ္စဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကအာရှရှိအမျိုးသားများသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေဆဲဖြစ်သည်။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဘဝအရည်အသွေးနိမ့်ကျခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်းအာရှတိုက်၊ ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့်ပုခက်နှင့်စီးပွားရေးစန်းပွမှု၏ဗဟိုအချက်အခြာနေရာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုအကြီးအကျယ်လျစ်လျူရှုထားဆဲဖြစ်သည်။29, 30 ယင်းပျံ့နှံ့မှုနှုန်း Self-အစီရင်ခံအပေါ်အခြေခံပြီးကြောင့်အာရှတိုက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်စာပေမှာဖော်ပြထားတဲ့ရလဒ်များကိုမှမတူဘဲ, အမှန်တကယ်နံပါတ်များကိုသိသိသာသာပိုကြီးဖြစ်ကြသည်။ ထိုင်ဝမ် (တရုတ်) တွင်ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့် Erectile ရာထူးအမည်-5 ရမှတ်များနိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်းအပေါ်အခြေခံပြီးအခါအမည်, Self-အစီရင်ခံရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ED ၏ Self-အစီရင်ခံအမှုပေါင်းတို့တွင်အနည်းပါးလာလူအပေါင်းတို့၏ထက်ဝက်ထက်ကုသမှုရှာ၏။31 အာရှယောက်ျားလည်းသူတို့ရဲ့အနောက်တိုင်းများထက်ကုသမှုရှာလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံ, ED နှင့်အတူယောက်ျား၏သာ 6% ထိရောက်သောကုသမှုရှာ၏။30 အဘယ်ကြောင့်ဤဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပေါ်ရသနည်း
ယဉ်ကျေးမှုသည်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္,၊ ၎င်းတို့အချင်းချင်း၊ ၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအုပ်စုနှင့်ရပ်ရွာနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည်ကိုသတ်မှတ်သည်။ အမျိုးသားများ၏လိင်ကျန်းမာရေးကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင်တစ် ဦး ချင်းနှင့်သူ၏ဘာသာရေး၊ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်နိုင်ငံအပါအ ၀ င်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယုံကြည်မှုအဆင့်ဆင့်ပါဝင်သည်။ အမျိုးသားများအတွက်, ပုလ်နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ရွယ်တူချင်းအကြားသူ၏အခန်းကဏ္defကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ သို့ရာတွင်တစ်ကိုယ်ရေနှင့်ဒေသအလိုက်ကွဲပြားခြားနားမှုပုဂလိကသဘောတရားသည်မရှင်းလင်းပါ။ အစဉ်အလာအရ၊ ပုလ်ဝိသေသလက္ခဏာများသည်စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ အမျိုးသားများအကြားကျန်းမာရေးရှာဖွေခြင်းအပြုအမူသည်အဆင့်အတန်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။32 Ng et al.33 ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံစုံလေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသက်တာ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်မိသားစုသည်လူဖြစ်ခြင်း, အာရှယောက်ျားဂုဏ်အသရေဖြစ်သောသူအဖြစ်ရှုမြင်ခံရ, အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ရှိခြင်းနှင့်အတူပုလ်ပေါင်းသင်းကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။33 တက်ကြွသောလိင်ဘ ၀ ရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်အောင်မြင်မှုရခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းတို့သည်ပုလ်အယူအဆကိုလျော့နည်းစေသည်။ အနိမ့်ဆုံးပျံ့နှံ့မှုနှုန်းနှင့်အာရှအမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမဟုတ်သောရှာဖွေခြင်းအပြုအမူများသည်အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်ပုလ်သို့မဟုတ်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သူတို့၏ပုလ်ခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံရသောအခါအမျိုးသားများသည်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးညံ့ဖျင်းခြင်းထက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခန်းကဏ္aဆုံးရှုံးခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အမျိုးသားများသည်၎င်းကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလေ့ရှိသည်။34 ရလဒ်အနေနဲ့အာရှယောက်ျားအိုမင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလကျခံဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲအစားသင့်လျော်သောကုသမှုရှာကြံ၏, သူတပါးတို့သည်ကျားမအခန်းကဏ္ဍကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ထိုကဲ့သို့သောအရက်သောက်အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးများ၏အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေကြသည်။34
အာရှလူတို့တွင်ကုသမှုဆီသို့အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားကိုလည်းအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိအာရှရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအကြားတည်ရှိနေပါသလား? ယခင်လေ့လာမှုများတွင်နှလုံးနာကျင်မှုနှင့်အတူအနောက်တိုင်းယောက်ျားနဲ့လူဝင်မှုအာရှယောက်ျားများ၏ကုသမှုကိုရှာကြံသဘောထားကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်အာရှယောက်ျား သာ. ကြီးမြတ်စိုးရိမ်စိတ်တွေ့ကြုံခံစားဖို့တော်မှာနှင့်သိသိသာသာအစောပိုင်းကကုသမှုရှာသောထင်ရှားခဲ့သည်။ အဆိုပါလူဝင်မှုအာရှယောက်ျား၏အဘယ်သူမျှမ unmanly သို့မဟုတ်အားနည်းခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်ရင်ဘတ်နာကျင်မှုများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာကြံစဉ်းစား။ တကယ်တော့ဒီလူအချို့ကိုတန်ဖိုးထားအထီး attribute တွေအဖြစ်မိသားစုနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နျြးမာရေးအတှကျဉာဏျပညာ, ပညာရေးနှင့်တာဝန်မှတ်။ အဘယ်ကြောင့်တိုင်းရင်းသားများနှင့်လူဝင်မှုအာရှယောက်ျားများ၏ကုသမှုကိုရှာကြံသဘောထားကိုကွာခြားပါသလဲ? သူတို့တစ်တွေနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်ပေါ်မူတည်ဖို့အများကြီးဆွေမျိုးများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာနေမကောင်းဖြစ်ခြင်း၏အခွင့်ထူးမရှိကြပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ဤလူတို့သည်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့် unmanly အဖြစ်လှောင်ပြောင်ခံရခြင်းအန္တရာယ်မျိုရမည်ဖြစ်သည်။35 ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအရေးပါသောအသက်အန္တရာယ်ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းအထငျမှားဖို့မရှိစေရန်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမကြာခဏတည်းကကုသမှုမရှိဘူးတတ်၏။
နောက်ထပ်ကိစ္စရပ်များရှုပ်ထွေးစေရန်, တရုတ်လူယုတ်မာအဖြစ် ED မှတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်ဆွေးနွေးခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုပါဝငျသညျအထူးသဖြင့်လျှင်, အရှက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ED နှင့်အတူယောက်ျားတစ်ဦးအနိမ့်မိသားစုဘဝမှလေးစားမှုနှင့်အတူအသက်တာ၏အရည်အသွေး, အလုပ်ဘဝ, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်နှင့်အထွေထွေပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမညီကြောင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအကန့်သတ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။36 တရုတ်ယောက်ျားမည်သူမဆိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဆွေးနွေးရန်ဖွယ်ရှိမဟုတ်ပါ။ သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆွေးနွေးရန်ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သို့သော်သူတို့တစ်တွေပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိတ်ဆွေတစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူထက်အစဉ်အလာရောဂါကိုငြိမ်းစေသောစကားပြောဖို့ပိုများပါတယ်။37 တရုတ်ယောက်ျားတစ်ဦးသည်သမားရိုးကျဆရာဝန်ထံမှဆေးကုသမှုကိုရှာကွသောအခါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်ခြင်းထက် comorbidities ပိုမိုဖွယ်ရှိသည်။ ဤသည်တစ်ဦးတည်း ED များအတွက်ကုသမှုရှာသောအနောက်တိုင်းယောက်ျား, မတူဘဲ၌တည်ရှိ၏။30
အမျိုးသားများကသူတို့၏အလောင်းများကိုစက်များအဖြစ်ရှုမြင်ပြီး၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်လိမ့်မည်ဟုယူဆကြသည်။ ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါအမျိုးသားများသည်အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှရပ်တန့်ခြင်း၊ ကျန်းမာသောအစာစားခြင်းအလေ့အထနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းစသည့်ရေရှည်အစီအမံများနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုကောင်းစွာမတွေ့ရသေးပါ။ ၎င်းတို့၏မျိုးပွားမှုဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဆေးကုသမှုခံယူသောအမျိုးသမီးများနှင့်မတူဘဲအမျိုးသားများသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုလိုက်နာမှုနည်းပါးသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒများအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရေးကြီးသောကဏ္ aspect တစ်ခုဖြစ်သည်။38 USA တွင်တရုတ်အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုအမျိုးသမီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆီသို့ဦးတည်ပိုပြီးအပြုသဘောရှိသည်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းထက်ပိုပြီးပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေးရှိသည်ဖော်ပြခဲ့တယ်။39 ဗဟိုအာရှမှာတော့မူလတန်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားလုံးကိုလာရောက်လည်ပတ်သူ 80% နှစ်ဦးစလုံးမြို့ပြနှင့်ကျေးလက်နေ setting တွင်, အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများကဖန်ဆင်းနေကြသည်။ ဗဟိုအာရှဒေသ၏မြို့ပြဒေသများထံမှ 50 နှစ်နှင့်အထက်အသက်ယောက်ျား 50 နှစ်ရှိပြီထက်လျော့နည်းကျေးလက်ယောက်ျားထက်ပိုမိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရှာကြံလျက်နေ၏။40 ကုသမှုရှာသောသဘောထားတွင်တွေ့ရှိရသောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအခွင့်အလမ်းကွာခြားမှုများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များ၏ကျန်းမာရေးကိုအာရုံစိုက်သည့်လက်ရှိမြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုအပေါ်ယေဘုယျသဘောထားတို့ဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်။ အမျိုးသားများ၏သက်တမ်းသည်အမျိုးသမီးများထက် ၇ နှစ်တိုသည်ဟူသောအချက်ကအမျိုးသားများအားကျန်းမာရေးအပေါ်ထားရှိသောသူတို့၏သဘောထားသည်သူတို့၏ဘဝများကိုထိခိုက်စေသည်ဟုဆိုသည်။30
Testosterone ဟော်မုန်းသည်အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ test မှပါ ၀ င်သည်။ testosterone ဟော်မုန်းနည်းခြင်းသည်အမျိုးသားမျိုးပွားခြင်းစနစ်အပါအ ၀ င်ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ခန္ဓာစနစ်များနှင့် ပါတ်သက်၍ အမျိုးမျိုးသောလက်တွေ့အခြေအနေများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။41 ထို့ကြောင့် ED နှင့်အတူယောက်ျားအဘို့, မတက်ရောက်ဆရာဝန်သူတို့ဆေးခန်း florid ဖြစ်လာမတိုင်မီနဲ့အခြားဆက်စပ်ရောဂါခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။31 ED နှင့်အတူလူတို့တွင်, 2% 12 လအတွင်းအဓိကနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်ရင်ဆိုင်ရနှင့် 11%5နှစ်အတွင်းထိခိုက်နေကြသည်။42 အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့အပေါ်တရုတ်လူတို့တွင်အသိပညာမလုံလောက်ဖြစ်ပါတယ်။37 ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဆရာဝန်များအနေဖြင့်လည်းအမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတနည်းပါးနေသည်။ ဤပြissueနာကိုမလုံလောက်သောအာရုံစိုက်မှုသည်တွေ့ရှိရသည့်ချို့တဲ့မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။30 ထို့အပြင်လိင်ဆိုင်ရာရောဂါများကိုကုသရာတွင်အချိန်ကန့်သတ်ချက်များသည်ဗဟုသုတမရှိခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ အထူးသဖြင့်ဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့်အခြားအသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်အခြားရောဂါများကိုကုသရမည်ဖြစ်ပြီးလူနာ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ဆရာဝန်အရေအတွက်မလုံလောက်ပါ။32
အမျိုးသားကျန်းမာရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အထူးကဏ္ on ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်သည်အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အမျိုးမျိုးသောထင်မြင်ချက်များကြောင့်အထူးကျန်းမာရေးသမားများအကြားကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကြောင့်မရရှိသေးပါ။ ၎င်းသည်မီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်၏အထူးဖြစ်သည့်အမျိုးသမီးများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားနေသည်။32 အာရှရှိအမျိုးသားကျန်းမာရေးသဘောတရားများအပေါ်ဆရာဝန်များ၏သဘောထားနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းတစ်ခုအရသမားတော်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကိုဆီးချိုရောဂါနှင့်သွေးတိုးရောဂါနှင့်ဆက်စပ်စေသည်။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါများနှင့် ED များသည်အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးပြlessနာများကိုမကြာခဏစဉ်းစားသည်။ ဆရာဝန်အများစုကအမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးသည်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကု၏နယ်ပယ်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပြီးမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်ဆရာဝန်များ၊ ဆရာဝန်အများစုကအသက်အရွယ်နှင့်အတူပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုဆုံးရှုံးခြင်းကိုမလွှဲမရှောင်နိုင်ကြောင်းနှင့်အမျိုးသားများအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကြုံတွေ့ရသောရောဂါများနှင့်အခြေအနေများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းလည်းသဘောတူကြသည်။ ထို့အပြင်ဆရာဝန်များစွာသည်လိင်ဆိုင်ရာပြissuesနာများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနှင့်ဗဟုသုတမရှိခြင်းတို့ကြောင့်အထီးလိင်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အတော်လေးမသက်မသာဖြစ်သည်။32
အခြားရွေးချယ်စရာကုသမှု / တိုင်းရင်းဆေး
အာရှကအခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ရိုးရာဆေးဝါးများ၏အရည်ပျော်အိုးသည်။ တစ်ဦးတည်းတရုတ်နိုင်ငံများတွင်ရိုးရာဆေးဝါးဆေးဝါးများ၏စုစုပေါင်းစားသုံးမှု 30% -50% အဘို့မှတ်။ ထိုမှတပါး, မလေးရှား, ယောက်ျား၏ 65% ရိုးရာဆေးဝါးသမားရိုးကျဆေးထက်ပိုကောင်းခဲ့ကြောင်းခံစားရတယ်။36
တရုတ်မှာတော့သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနတစ်ခုသိသာထင်ရှားသောပမာဏအစဉ်အလာဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အပ်စိုက်ကုထုံးနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့အပေါ်သက်ရောက်မှု၏ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်မှကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကအပြုသဘောရလာဒ်ကအခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးနှင့်အတူရရှိသောနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့၏ကုသမှုအတွက်ရိုးရာနည်းလမ်းများ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုထောက်ခံနိုင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါဖျောပွရလဒ်များကိုမှမရှိစေရန်, များစွာသောလူတို့သညျဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးကုများနှင့်ခေတ်သစ်ဆေးပညာ၏အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှရှက်စရာလည်ပတ်မှုရှောင်ရှားရန်တိုင်းရင်းဆေးရှာကြာလော့။37
ခေတ်သစ်ဆေးပညာ၏ရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးနောက်လူအများတို့သည်ရိုးရာဆေးပညာကိုအသုံးပြုကြသည်။ လူနာများသည်မိမိကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းအမျိုးမျိုးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်သူတို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုမိုတာ ၀ န်ယူရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာဆေးပညာသည်ဤရှုထောင့်များကိုလွှမ်းခြုံထားပြီးလူနာ၏ပြproblemsနာများကိုဘက်စုံချဉ်းကပ်မှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အပ်စိုက်ကုထုံး၊ အပ်စိုက်ကုထုံး၊ Ayurvedic၊ ယောဂ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ အနှိပ်ကုထုံး၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကိုယ်ခံပညာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးကုသမှုစသည့်ရိုးရာအလေ့အကျင့်များသည်ဘက်စုံချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းများသည်ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ်နှင့်စိတ်တို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးကုသမှုများရရှိသည် မှတဆင့် ခေတ်သစ်ဆေးပညာ၌ရှိသကဲ့သို့စွမ်းအင်ထက်ကိစ္စများ၏အယူအဆ, ။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာ၏အခြေခံဖြစ်သောသိပ္ပံရှုပ်ထွေး, နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ဒီ concept ကိုအလွယ်တကူနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ရှုနှင့်အလွယ်တကူဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘက်စုံချဉ်းကပ်မှု၏လက်ခံခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။
လူမျိုးစုများ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်နေ့စဉ်ရိုးရာဆေးဖက်ဝင်အလေ့အကျင့်များကအမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အားလုံးပါ ၀ င်ကြောင်းသေချာစေသည်။ ရိုးရာနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် penile အရေပြားအောက်တွင် ball bearings များထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ် glans မှတဆင့် semiprecious ကျောက်မျက်များနှင့်ရွှေဘားများထည့်သွင်းခြင်းတို့အပါအ ၀ င်၊ ဤအလေ့အကျင့်များကိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရှိအလုပ်သမားလူတန်းစားများကြားတွင်ရေပန်းစားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်းတို့သည်တတ်နိုင်သောကြောင့် ၄၅ ရက်အတွင်းအနာများပျောက်ကင်းမည်ဟုဖောက်သည်များကကတိပေးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ခေတ်သစ် penile implants များသည်ပိုမိုစျေးကြီးပြီးဆေးရုံတက်ရန်လိုအပ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ယောက်ျား ၁% ခန့်သည်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် penile implants နည်းများကိုအသုံးပြုကြသည်။43
ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးပညာ (phytotherapy) ကုထုံးကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အပင်သို့မဟုတ်စက်ရုံကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Phytotherapy လေ, သွေးနှင့်အာဟာရ၏ပေးပို့ဘို့ re-တည်ထောင်ရန်လိုင်းများမှကောက်ယူသည်, ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဒြပ်စင်ဟန်ချက်ညီကူညီဖို့ရန်။44 phytotherapy ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်အိုမင်း, ရောဂါများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများယိုယွင်းခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်သောခန္ဓာကိုယ်, အတွင်းအရေးပါသောအစွမ်းအင် restore နှင့်ထို့အတွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသည်အနာပျောက်စေသောသီအိုရီခန္ဓာကိုယ်တွေထဲက system ထဲမှာစွမ်းအင်တစ်ခုအချိုးမညီမျှမှုသည်အခြားစနစ်များကိုထိခိုက်အတွက်ဘက်စုံချဉ်းကပ်မှု, ချမှတ်။ ထို့ကြောင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးပညာတဦးတည်းစနစ်တိကျတဲ့မဟုတ်ပါဘူးနှင့်တစ်ခုတည်းရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ အနောက်တိုင်းဆေးပညာများတွင်တစ်ဦးချင်းစီဆေးလုံးတိကျတဲ့ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို / system အတွက်ရည်ရွယ်လျက်ရှိ၏ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးလူနာမျိုးစုံ comorbidities များအတွက်ဆေးပြားနှင့်ပြည့်ဝ၏တောင်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, တိုင်းရင်းဆေးသမားရိုးကျဆေးထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များအာရှလူတို့တွင်သမားရိုးကျဆေးဝါးများ၏လျော့နည်းသွားအသုံးပြုမှုကိုဦးတည်သွားစေ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အထူးသဖြင့်, ရိုးရာဆေး, အာရှတန်ဖိုးများ, ယုံကြည်မှုများနှင့်ကျန်းမာရေးမှအတွေးအခေါ်တိမ်းညွတ်ပိုမိုအရတော့ဖြစ်ပါတယ်။45 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံအဖြစ်ထို့အပြင်ရိုးရာဆေးဝါးပိုတတ်နိုင်သည်။ အာရှအမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ယုံကြည်ချက်တစ်ခု potpourri ဖြစ်ပြီး, ရိုးရာဆေးတစ်ခုကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်နှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆေးဝါးများသူတို့ရိုးရာဆေးဘက်ထူထောင်မှု, စျေးကွက်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များအတွက်ရရှိနိုင်ကြောင့်အတော်လေးအလွယ်တကူရယူနိုင်ပြီးလက်တွေ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဆေးညွှန်းမလိုအပ်ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဝယ်ယူရေးအတွက်အဆင်မပြေ phosphodiesterase-5 inhibitor ၏ရပ်စဲအသုံးပြုမှုအတွက်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။31 ထို့အပြင်ခေတ်သစ်ကုထုံးအချို့ကိုစီမံရန်ခက်ခဲသည်။ ဥပမာ - alprostadil ကိုလိင်တံထဲသို့ထိုးသွင်းရမည်။ လူနာ၏သမားရိုးကျဆေးဝါးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီးရိုးရာဆေးဝါးများသည်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသည်ဟုစားသုံးသူများစွာကယုံကြည်ကြသည်။45 အာရှယောက်ျားလည်းသူတို့၏ဆရာဝန်များကပိတ်ထားစိတ်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်အသိပညာကင်းမဲ့နှင့်နားလည်သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးများ၏အတည်ပြုကြပါဘူး။ ဆနျ့ကငျြရိုးရာယောဂီ, အထောကျအကူအားရစရာနှင့်အပြုသဘောအဖြစ်မှတ်နေကြသည်။36
အများစုကရိုးရာဆေးဝါးအပေါ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်နေကြတယ် စသည်တို့အတွက် ဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်၌၎င်း, အနည်းငယ်လေ့လာမှုများလူသားများတွင်ဖျော်ဖြေနေကြသည်။ ထို့အပြင်ဤဆေးဝါးများ၏တက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများလွယ်ကူစွာသက်သေပြနေကြသည်မဟုတ်, အရှင်လူနာမသိသောထိရောက်မှုနှင့်ထိရောက်မှု၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဓာတုပစ္စည်းတစ်ကော့တေးယူပါ။ အလားတူပင်ရိုးရာဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်ကိုက်ညီမှုသက်ရောက်မှုမှဦးဆောင်ရသောကြောင့်မြေဆီလွှာတွင်အခြေအနေများအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အခြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ၏ variable ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဆေးညွှန်းအောင်မြင်ရန်ခက်ခဲသည်။ အာရှနောက်ထပ်ဒြပ်ပေါင်းများအချို့အစိတ်အပိုင်းများထဲတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သို့မဟုတ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းများ Non-ဖြစ်တည်မှုဤပြဿနာ။36
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန် Access ကို
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်အသုံးပြုနိုင်မှုသိသိသာသာပြဿနာဖြစ်တယ်, ကျန်းမာရေးအဆောက်အဦမှအကွာအဝေးနှင့်အသုံးချနှုန်းအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးမျိုးစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တပါးအမြိုးသားအများစုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါဖျောပွပြဿနာအာရှအတွက်သိသာထင်ရှားသောပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အာရှအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများမှာလည်းအလားတူပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရသည်။ တကယ်တော့တချို့မူလတန်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများကျေးရွာများအကြား 300 ကီလိုမီတာကဲ့သို့ကြီးမားသောမြစ်ဒေသများဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်လူနာကျန်းမာရေးစင်တာများရောက်ရှိအစွန်းရောက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအိမ်မှာလာရောက်လည်ပတ်သူများအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာခရီးသွားလာအချိန်အပါအဝင်အလားတူအခက်အခဲများ, ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။40 Saroja et al.46 မလေးရှားလူဦးရေကိုလေ့လာများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများ၏အသုံးချနာတာရှည်နာမကျန်း, အသက်နှင့်လူမျိုးစုများ၏ရှေ့မှောက်တွင်အပေါ်မှီခိုခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။46 ဥပမာ, တရုတ်, အောက်မှာ-အစီရင်ခံကြောင့်သူတို့ရဲ့သာလွန်ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းဒီထက်မကြာခဏတိုင်းရင်းဆေးမှအနာများနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းမြင့်မားတံခါးခုံကိုတွန့်ဆုတ်ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုအကျိုးရှိစွာအသုံးချ။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်ပညာရေးအဆင့်အတန်းကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု-ရှာကြံအပြုအမူတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
အနာဂတ်တွင်အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည့်နောက်ပြproblemနာတစ်ခုမှာခေတ်မီဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့အာရှရှိလူ ဦး ရေသည်အလျင်အမြန်အိုမင်းနေပြီးစီးပွားရေးသည်အသက်ကြီးသောလူ ဦး ရေနှင့်မရင်ဆိုင်နိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့် ၂၀၃၀ နှင့် ၂၀၅၀ အကြားအဓိကအာရှနိုင်ငံများရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ၁၅% အထိတိုးလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေသောလူ ဦး ရေနှင့်မကိုက်ညီပါကသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အရင်းအမြစ်များလုံလုံလောက်လောက်မရနိုင်ပါ။47 ထို့အပြင်အဆုံးအသုံးပြုသူများသည်သွေးစစ်ဆေးမှုများ၊ ဆေးဝါးများနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာအခြားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးများကိုမတတ်နိုင်လျှင်အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားမှုများသည်သိသိသာသာထိခိုက်လိမ့်မည်။
အထက်ဖော်ပြပါရလဒ်များသည်အာရှ၏လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုထင်ဟပ်စေပြီး 'သုံးဆအဖြစ်ဆိုး' ဟူသောဝေါဟာရကိုတိတိကျကျဖော်ပြသည် (ကြွယ်ဝမှုမတိုင်မီအိုမင်းခြင်း၊ အိုမင်းခြင်းမပြုမီဖျားနာခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစရိတ်များပြားလာခြင်းကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘတ်ဂျက်ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်) ။48
အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်ရှားသောစာတမ်းများကိုအနောက်နိုင်ငံများတွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးအာရှတွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုများမှာမူရှားပါးသည်။49 အဘယ်အရာကိုအချက်များကဤမညီမျှမှုအထောက်အကူပြု? အာရှယောက်ျား, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးအရကွဲပြားခြားနားသောအနောက်တိုင်းယောက်ျားကနေပါ၏50, 51 အရှင်, အနောက်နိုင်ငံတွေမှာထုတ်လုပ်ရလဒ်များကိုအာရှရှိအမျိုးသားများသက်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အာရှယောက်ျားအပေါ်စာရင်းဇယားရယူရမည်ဖြစ်သည်။ အတော်များများကကွဲပြားခြားနားသောအချက်များအာရှယောက်ျားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အချက်အလက်များ၏ရှားပါးမှုမှကူညီသည်။ ဥပမာ, အာရှရှိပစ္စုပ္ပန်ဟာကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကို double-သန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများအာရှတိုက်တွင်ထွက်သယ်ဆောင်ကြသောအခါအမည်ရ, ရလဒ်များကိုမှန်ကန်စွာအနက်နှင့်ဘာသာစကားမြားစှာအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘာသာစကားအတားအဆီး, ယဉ်ကျေးမှု, ယုံကြည်မှုများနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ status ကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လွဲမှားစွာအနက်၏ရလဒ်အဖြစ်ဆေးသမားအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုများကပိုဆိုးကြောင်းတစ်ခုပြည့်စုံစေ့စပ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင်, ဒေတာစုဆောင်းမှုအတွက်တူညီနေမှုသို့မဟုတ်စံချိန်စံညွှန်းချို့တဲ့လျက်ရှိ၏ အရှင်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့ကုန်းတက်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကွဲပြားခြားနားသော parameters တွေကိုသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နှစ်ခုအာရှလေ့လာမှုများများတွင်ကွဲပြားခြားနားသော cutoff တန်ဖိုးများကိုအခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းလေ့လာမှု, 0.023 nmol ဌတစ်ခုံမှာတော့-1 အခြားလေ့လာမှုထဲမှာ, cutoff တန်ဖိုးကို nmol ဌ 0.030 ဟုသတ်မှတ်ခံခဲ့ရစဉ်လျှောက်ထားခဲ့သည်-1။ နောက်ထပ်အခြေအနေကရှုပ်ထွေးစေရန်, ကွဲပြားခြားနားသော assay အသုံးပြုသွားမည်, နှင့် assay များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့် reproducibility ကွဲပြားခဲ့ကြသည်။ မတူညီတဲ့အဆင့်ဆင့်နှင့်အသက်အရွယ်မရွေးမှာ testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့၏မတူညီသောဇီဝသက်ရောက်မှုရှိနေသော်ငြားလည်း, ထိုဖျောပွလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုဆနျ့ကငျြရှိကြ၏။41 ယခင်လေ့လာမှုများ phytoandrogen အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအတည်ပြုပေမယ့်အဲဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေတိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ကောက်ယူနှင့်လူသားမြားသညျအပျေါကောငျးမှလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေရှားပါးခဲ့သည်။41
သမားရိုးကျခေတ်သစ်ဆေးပညာအပြင်, အာရှသားကျောနှစ်ပေါင်းထောင်ချီမှစတငျရသည့်ရိုးရာနှင့်ဖြည့်စွတ်ဆေးပညာအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်များအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းဆေးဝါးများအနောက်နိုင်ငံတွေမှာသူတို့အားဆင်တူသည်။ ပညာရေးအဘို့, ကုသ phosphodiesterase type ကို5inhibitors, intracavernosal Prostaglands လုပ်လိုက်တာအီးတို့ပါဝင်သည်1, စိုက်ထူ, လေဟာနယ် devices များနှင့် penile Prosthesis များအတွက် urethral စနစ်အားဆေး။ ယခင်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုထိုင်ဝမ်အမျိုးသားများတွင် sildenafil များ၏လုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှု (တရုတ်), အနောက်တိုင်းလူဦးရေနှင့်ဆင်တူခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။52 intracavernosal Prostaglands လုပ်လိုက်တာ, E နဲ့ကုသအာရှဆီးချိုလူနာအပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှုမှာ1, ED လူနာ 76.5% ကျေနပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။53 ထိုင်ဝမ်ကောက်ယူအခြားလေ့လာမှု (တရုတ်) ခုနှစ်, penile Prosthesis ခွဲစိတ်အတူခြုံငုံကျေနပ်မှု 86.6% ဖြစ်ခဲ့သည်။54 အာရှတိုက်မှာရရှိနိုင်ရိုးရာနှင့်ဖြည့်စွတ်ဆေးဝါးများ၏ armamentarium အတွက်ပြသ နောကျဆကျတှဲ။ owever ဤကုသမှု၏ထိရောက်မှုနိဂုံးပိုင်းအထောက်အထားနှင့်အတူခိုင်မာသောလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ကြပြီမဟုတ်။
hypogonadism အဘို့, testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးတစ်ခုဂျယ်၏ပုံစံ, patch ကို, ပါးစပ်သို့မဟုတ်အသားဆေးထိုးပေးနိုင်ပါသည်။ testosterone undecanoate တစ်ဦးရှည်လျားသော-သရုပ်ဆောင်ထိုးဆေး testosterone ဟော်မုန်းမကြာသေးမီကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နှင့် testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့ရောဂါနှင့်အတူကိုရီးယားလူနာအတွက်ကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate, ထိရောက်သောလုံခြုံပြီးခံသာဖွစျကွောငျးညွှန်ပြ။55 အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ဘို့, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ကုထုံးဒေသခံထုံဆေးလိမ်းဆေး, အက်စ်အက်စ်လိမ်းဆေး, tramadol နှင့်ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Dapoxetine, ကြာကြာ-သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors ထက်နည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်အသစ်တစ်ခု Short-သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor မကြာသေးမီကမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အာရှပစိဖိတ်ဒေသအပေါ်ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ dapoxetine သိသိသာသာကြာရှည် intravaginal ejaculatory အောင်းနေချိန်အချိန်နှင့်အချိန်မတန်မီ ejaculatory ပရိုဖိုင်းကိုအတိုင်းအတာတိုးတက်လာသည်။ ထို့အပြင်ရလဒ်များကို dapoxetine ကောင်းစွာဒဏ်ခံခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။56
အနောက်နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အာရှတွင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်ဒေတာအတော်လေးရှားပါးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာခိုင်မြဲစွာအာရုံကိုအချက်ကိုခိုင်လုံမှုကြောင့်ဆေးဝါး၏အခက်ကဲ့သို့ထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာတိုးပွားလာခဲ့ကြောင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏အာရှပစိဖိတ် Society ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၏တိုးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကစားခဲ့သည်။
အာရှအမျိုးသားများသည်ဇီဝဗေဒ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယုံကြည်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အနောက်တိုင်းသားများနှင့်ကွဲပြားသည်။ လောလောဆယ်အာရှလူနာများကိုအနောက်တိုင်းလူ ဦး ရေမှရရှိသောအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ စီမံခန့်ခွဲသည်။ အာရှသုတေသီများသည်၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောဆုံးဖြတ်ချက်အထောက်အကူများနှင့်မျှဝေသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစီအစဉ်များကိုတီထွင်ရမည်။ အမျိုးသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အနာဂတ်သုတေသနသည်အာရှလူ ဦး ရေ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုအုပ်စုများ၏အတွေးအခေါ်များကိုလွှမ်းခြုံသင့်သည်။ ဤအမျိုးသားများကိုလေ့လာခြင်းသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်သက်သေအထောက်အထားအခြေခံသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်အထောက်အကူများပေါ်တွင်အခြေခံထားသောကိုယ်ပိုင်နှင့်ထိရောက်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။48
ရှေးပဝေအချိန်ကတည်းကအာရှသားရိုးရာနှင့်ဖြည့်စွတ်ဆေးပညာ dabbling ပါပြီ။ အာရှတိုက်မှာပစ္စုပ္ပန်ဟာကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုများရှိနေသော်ငြားလည်း, များစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာကုသရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဤကုသမှုကျယ်ကျယ်လေ့လာခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးအပေါ်အများစုကသုတေသနကောက်ယူနေသည် စသည်တို့အတွက် သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအပေါ်အခြေခံသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကုသမှု၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုသက်သေပြခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ သို့သော်အစဉ်အလာများနှင့်ဖြည့်စွတ်ဆေးဝါးအပြည့်အဝအသုံးချရပါမည်, နှင့်ပိုပြီးသုတေသနဆိုးများမှကောင်းသော sieve မှကောက်ယူရပါမည်။
အာရှသား၏အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။ လိင်အောက်တန်းအဖြစ်ရှုမြင်မဖြစ်သင့်နှင့်ဆေးသမားကိုတိုက်ရိုက်ဆီးချိုရောဂါနှင့်သွေးတိုးရောဂါကဲ့သို့အရေးကြီးသောအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အစိုးရကလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုများအတွက်လုံလောက်သောရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားပေးရန်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံအများအပြားမှာတော့ထိုကဲ့သို့သော PDF5 inhibitors အဖြစ်ဆေးဝါးများအစိုးရကထောက်ပံ့ကြသည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့်အများဆုံးလူနာကုသမှုမတတ်နိုင်နှင့်တိတ်ဆိတ်စွာမခံစားနိုင်ပါ။ Sexology များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏အာရှပစိဖိတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အာရှ-Oceania အသင်းချုပ်အဖြစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားပေးသင့်ပါတယ်။ အာရှယောက်ျားလိင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မညီကြောင်းကိုသွန်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကုသနိုင်မယ့်ရောဂါကြောင်းကိုသဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။ ဒီအဆုံး, မီဒီယာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်။
အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုအာရှသားမှတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြေရှင်းပေးရန်မွေးစားထားရပါမည်ဖြစ်သောကြောင့်အာရှတိုက်မှာအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ်ဦးစိန်ခေါ်မှု။ ထို့ကြောင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်, နှင့်ရိုးရာနှင့်ဖြည့်စွတ်ဆေးပညာ၏ကျယ်ပြန့်အရင်းအမြစ်များကိုအာရှတိုက်မှာအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်ပုတ်ရပါမည်။
နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် အဆိုပါ Molecular Psychiatry က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်စက္ကူ (http://www.nature.com/aja) အတူ
တရုတ်မျောက်ဥ (Dioscorea ဆန့်ကျင်ဘက်)
ဂျင်ဆင်း (Panax ginseng ဟာ)
သမင်ချို (Cervi pantotrichum)
Gingko (Ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေး)
Tongkat အလီ (Eurycoma longifolia)
Epimedium (Horny ဆိတ်ပေါင်းပင်) extract
Lycium အသီး (Fructus lycii)
walnut kernel ကို
et al Hatzimouratidis K ကို Amar အီး, Eardley ငါ Giuliano က F, Hatzichristou: D ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်လမ်းညွှန်ချက်များ: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်။ EUR Urol ။ 2010; 57: 804-14 ။ [PubMed]
Tan HM, Low WY, Ng CJ, Chen KK, Sugita M, et al ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုများနှင့်အာရှအမျိုးသားများမှ ED ကိုရှာဖွေကုသမှု - အာရှတိုက်ရှိဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှု (MALES) လေ့လာမှု။ J Sex Med ။ 2007; 4: 1582-92 ။ [PubMed]
cho BL, Kim က YS, Choi YS, ဟောင်ကောင် MH, Seo HG, et al ။ မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်အချက်: ကိုရီးယားလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2003; 15: 323-8 ။ [PubMed]
Bai မေး, Xu QQ, Jiang H ကို, Zhang က WL, ဝမ် XH, et al ။ တရုတ်မြို့ကြီးသုံးမြို့တွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အန္တရာယ်အချက်: တစ်လူထုအခြေပြုလေ့လာမှု။ အာရှ J ကို Androl ။ 2004; 6: 343-8 ။ [PubMed]
Chen က KK, ချင်းမိုင် HS, Jiann ကို BP, လင်း JS, လျူ WJ, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့ 40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးအတွက် Self-အစီရင်ခံလိင်ဆက်ဆံမှုကျေနပ်မှုအပေါ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်သက်ရောက်မှုများပျံ့နှံ့။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2004; 16: 249-55 ။ [PubMed]
Li က MK, Garcia က LA က, ရို R ကိုလီ MK, Garcia က LA က, et al ။ အနိမ့်ဆီးကျေးရွာအုပ်စုလက္ခဏာတွေနှင့်အာရှရှိအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ငါးအာရှနိုင်ငံများမှအိုမင်းယောက်ျား၏စစ်တမ်းတစ်ခု။ BJU Int ။ 2005; 96: 1339-54 ။ [PubMed]
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Kongkanand အေပျံ့နှံ့နေတဲ့။ ထိုင်း Erectile အလုပ်မဖြစ် epidemiological လေ့လာမှု Group မှ။ int J ကို Androl ။ 2000; 23 ပျော့ပျောင်း 2: 77-80 ။ [PubMed]
Tan က JK, ဟောင်ကောင် CY, PNG DJ သမား, Liew LC, Wong က ML, et al ။ စင်္ကာပူမှာ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အချက်များ-လူဦးရေ-based လေ့လာမှု။ စင်္ကာပူ Med ဂျေ 2003; 44: 20-6 ။ [PubMed]
ချင်းပြည်နယ် CM, ဦးခင် LW, Quek P ကို, Moorthy P ကို, စင်္ကာပူ၏အိုမင်းအထီးလူဦးရေအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Lim က P. ပျံ့နှံ့နေတဲ့: လူမြိုးတစျမြိုး-ကျယ်ပြန့်ကျပန်းစစ်တမ်း၏ကြားဖြတ်အစိုးရရလဒ်များကို။ BJU Int ။ 2002; 90 ပျော့ပျောင်း 2: 38 ။
Khoo EM, Tan က HM, အနိမျ့ WY ။ အိုမင်းယောက်ျားအတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် comorbidities: မလေးရှားအတွက်မြို့ပြ Cross-Section လေ့လာမှု။ J ကိုလိင် Med ။ 2008; 5: 2925-34 ။ [PubMed]
Low WY၊ Khoo EM, Tan HM, Hew FL, Teoh SH ။ သက်ကြီးရွယ်အိုအထီးတွင်စိတ်ကျရောဂါ၊ ဟော်မုန်းအခြေအနေနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - မလေးရှားနိုင်ငံရှိလူထုလေ့လာမှုတစ်ခု၏ရလဒ်။ J အမျိုးသားများရဲ့ကျား၊ မကျား၊ 2006; 3: 263-70 ။
Feldman HA, စတိန်းငါ Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB ။ သင်ျခြိုနှင့်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု: အမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ J ကို Urol ။ 1994; 151: 54-61 ။ [PubMed]
Shirai M က, Marui အီး, Hayashi K ကို Ishii N ကို, အာဘေးကတီပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆက်စပ်မှု။ int J ကို Clin Pract ။ 1999; 102: 36 ။ [PubMed]
Nicolosi တစ်ဦးက, Glasser DB ကင်မ် SC, Marumo K ကို Laumann EO, et al ။ အာရှနိုင်ငံအများ၏မြို့ပြလူဦးရေအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက် 40-80 နှစ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အကူအညီနဲ့-ရှာကြံပုံစံများ။ BJU Int ။ 2005; 95: 609-14 ။ [PubMed]
Lau JT, ဝမ်မေး, Cheng Y ကို, ယန်က X, Lau JT, et al ။ တရုတ်အတွက်ကျေးလက်ဒေသဧရိယာထဲမှာအသက်ငယ်လက်ထပ်လူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ။ Urology ။ 2005; 66: 616-22 ။ [PubMed]
McMahon CG, Althof SE, Waldinger MD, Porst H ကို, ဒင်း J ကို, et al ။ ရာသက်ပန်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ထားတဲ့သက်သေအထောက်အထား-based ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်: လိင်ဆေးပညာများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Society ရဲ့အစီရင်ခံစာ (ISSM) သင့်ရာကို အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏အဓိပ္ပါယ်အဘို့အရေးကျောမတီ။ J ကိုလိင် Med ။ 2008; 5: 1590-606 ။ [PubMed]
Moreira ED, Jr ကင်မ် SC, Glasser: D, Gingell C. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ဆက်စပ်အကူအညီနဲ့-ရှာကြံပုံစံများပျံ့နှံ့နှင့်အမျိုးသမီးအသက်ကိုရီးယား 40-80 နှစ်ပေါင်း: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားလေ့လာမှုနှင့်အပြုအမူ (ထံမှဒေတာ GSSAB) J ကိုလိင် Med ။ 2006; 3: 201-11 ။ [PubMed]
Quek KF, Sallam AA ကို, Ng သည် CH, က Chua သမဝါယမ။ cross-section လေ့လာမှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်မလေးရှားလူဦးရေအတွက်လူတို့တွင်, လူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းပျံ့နှံ့။ J ကိုလိင် Med ။ 2008; 5: 70-6 ။ [PubMed]
Lau JT ကင်မ် JH, Tsui hy ။ လူဦးရေကိုအခြေခံပြီးလေ့လာမှု: ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, တရုတ်လူဦးရေအတွက်အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူလိင်နှင့်အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားအမြင်များပျံ့နှံ့။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2005; 17: 494-505 ။ [PubMed]
ပန်းခြံ HJ, Park က JK, ပန်းခြံ K သည်, Lee က SW, Kim က SW, et al ။ ကိုရီးယားမှာနေတဲ့လူငယ်နှင့်လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ပျံ့နှံ့: ကိုရီးယား Andrological Society ကနေပေါင်းစုံပါအင်တာနက်-based စစ်တမ်း။ အာရှ J ကို Androl ။ 2010; 12: 880-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nieschlag အီး, Swerdloff R ကို, Behre HM, Gooren LJ, Kaufman JM, et al ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, အထီးနှောင်းပိုင်း-စတင်ခြင်း hypogonadism ၏ကုသမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး: ISA, ISSAM နှင့် EAU အကြံပြုချက်များ။ EUR Urol ။ 2005; 48: 1-5 ။ [PubMed]
Lunenfeld B, Saad က F, Hoesl အီး။ သိပ္ပံနောက်ခံနဲ့ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်: အထီးနှောင်းပိုင်း-စတင်ခြင်း hypogonadism ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, ကုသမှုနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်း ISA, ISSAM နှင့် EAU အကြံပြုချက်များ။ အိုမင်းအမျိုးသား။ 2005; 8: 59-74 ။ [PubMed]
Wong က SY, ချမ်း, DC, ဟောင်ကောင်တစ်ဦးက, ဝူးဂျေပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင်အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့မှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ။ ဇီဝြဖစ်။ 2006; 55: 1488-94 ။ [PubMed]
Beutel ME, Schneider H ကို, အိုမင်းအထီးအတွက် Weidner ဒဗလျူရောဂါလက္ခဏာများသို့မဟုတ်တိုင်ကြားချက်: မေးခွန်းမရရှိနိုင်သော။ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအေ 2004; 43: 1069-75 ။ [PubMed]
အနိမျ့ WY, Khoo EM, Tan က HM ။ Hypogonadal ယောက်ျားနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအရည်အသွေးကို။ အိုမင်းအမျိုးသား။ 2007; 10: 77-87 ။
လီ JY လီ XY လီ M က, Zhang က GK, Ma FL, et al ။ ကျန်းမာတရုတ်ယောက်ျားအိုမင်းအတွက်အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်း၏သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်၏ကျဆင်းမှု။ အိုမင်းအမျိုးသား။ 2005; 8: 203-6 ။ [PubMed]
et al လင်း YC, Hwang TI, ချင်းမိုင် HS, ယန် CR, Wu HC ။ ထိုင်ဝမ်ယောက်ျားအတွက်လက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူအန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့၏ဆက်စပ်မှု။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2006; 18: 343-7 ။ [PubMed]
Tan HM, Ng CJ, Low WY, Khoo EM, Yap PK, et al ။ Subang အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးသုတေသန - လူမျိုးပေါင်းစုံအသိုင်းအဝိုင်းအခြေပြုလေ့လာမှုဖြစ်သည်။ အိုမင်းခြင်းအမျိုးသား 2007; 10: 111 ။
Sun Y, Liu Z. တရုတ်ပြည်ရှိအမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး။ J အမျိုးသားများရဲ့ကျား၊ မကျား၊ 2007; 4: 13-7 ။
Liao CH, ချင်းမိုင် HS ။ ထိုင်ဝမ်မှာ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့, ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါ။ J အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး။ 2008; 5: 289-96 ။
Yates M၊ Low WY, Rosenberg D. Phys ဆရာဝန်သည်အာရှရှိ“ အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး” အယူအဆကိုဆရာဝန်၏သဘောထား။ J အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး။ 2008; 5: 48-55 ။
င CJ, Tan HM, အနိမျ့ WY ။ အာရှအမျိုးသားများသည်အဘယ်အရေးကြီးသောပုလ်ဂုဏ်သတ္တိများဟုမှတ်ယူကြသနည်း။ ဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုအပေါ်အာရှအမျိုးသားများ၏သဘောထားများလေ့လာချက်မှတွေ့ရှိချက်များ။ J အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး။ 2008; 5: 350-5 ။
Bhui K ကို Chandran M က, Sathyamoorthy G. အစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အာရှတောင်ဘက်ယောက်ျား။ int ဗြာစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 14: 52-9 ။
Galdas P, Cheater F, Marshall P. အဖြူနှင့်တောင်အာရှအမျိုးသားများ၏နှလုံးရင်ဘတ်နာကျင်မှုအတွက်ဆေးကုသမှုခံယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်၌ပုလ်၏အခန်းကဏ္Whatမှာအဘယ်နည်း။ J ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှု Res မူဝါဒ 2007; 12: 223-9 ။ [PubMed]
အနိမ့် WY, Tan HM ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အာရှရိုးရာဆေးပညာ။ J အမျိုးသားများရဲ့ကျား၊ မကျား၊ 2007; 4: 245-50 ။
Sun က YH, လျူ ZY ။ တရုတ်နိုင်ငံရှိအမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး။ J အမျိုးသားများရဲ့ကျား၊ မကျား၊ 2007; 4: 13-7 ။
လူးဝစ် JG ။ အိုမင်းအထီးမှ diagnostic ချဉ်းကပ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Urol ။ 2002; 20: 17-22 ။ [PubMed]
ray က MS ။ အမေရိကန်တရုတ်ကျောင်းသားလူဦးရေအတွက်ကျားမအာမခံ status ကိုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသဘောထားများနှင့်ကျန်းမာရေးအမူအကျင့်များအခန်းက္ပ။ Ethn ကနျြးမာရေး။ 2001; 6: 197-209 ။ [PubMed]
Cheryrl EC, Micheal, B, Olga Z. အာရှအလယ်ပိုင်းအတွက်အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချအတွက်ကျားမကွာဟမှု။ ကနျြးမာရေးပေါ်လစီ Plann ။ 2002; 17: 264-72 ။ [PubMed]
Lee ကဘီစီ Tan HM ။ နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခြင်း hypogonadism: အာရှအတွေ့အကြုံ။ J အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး။ 2008; 5: 297-302 ။
က de Kretser DM ။ အထီးကျန်းမာရေးစိတ်ပိုင်းဖြတ်: ဇီဝဗေဒနှင့်လူမှုရေးအချက်များများ၏အပြန်အလှန်။ အာရှ J ကို Androl ။ 2010; 12: 291-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Terrence နာရီ။ ပုံထဲကလူတို့သညျချပြီး: အရှေ့တောင် AsiaIn S22 အမျိုးသားမျိုးပွားခြင်းနှင့်လိင်အခန်းကဏ္ဍများတွင်အထီးမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ။ အဆိုပါ IUSSP XXIV ကွန်ဂရက်၏တရားစွဲဆိုမှု; 18-24 သြဂုတ်လ 2001; ဆာဗေးဒေါ, ဘရာဇီး။ IUSSP, ပဲရစ်, ပြင်သစ်, 2001 ။
Yuen SH, Kwok FS, Raymond CC ကို။ anti-အိုမင်းဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးပညာ-ဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်သူတို့အိုမင်း-ဆက်စပ် neurodegerative ရောဂါများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Res ဗျာ 2010 အိုမင်း; 9: 354-62 ။ [PubMed]
Wong LP၊ Tan HM၊ Low WY, Ng CJ ။ Erectile အခက်အခဲများကိုကုသရာတွင်ရိုးရာနှင့်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (T / CM) - အာရှတိုက်ရှိဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှု (MALES) လေ့လာမှုမှတွေ့ကြုံမှု။ J အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး။ 2008; 5: 356-65 ။
et al Saroja K ကို Kavitha S က, ဝါး YL, Jemain AA ကို, Tishya ငါ။ မလေးရှားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများအသုံးချမှပံ့ပိုးအချက်များ: လူဦးရေကိုအခြေခံပြီးလေ့လာမှု။ အာရှ Pac J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2010; 21: 442-50 ။ [PubMed]
အခြားအာရှနိုင်ငံများဂျပန်နှင့်၎င်း၏ဂယက်ထဲမှာလူဦးရေရဲ့အိုမင်းခြင်းဟာ Naohiro Y. ။ J ကိုအာရှ Econ ။ 1997; 8: 245-61 ။ [PubMed]
Tan HM၊ အာရှမှ Horie S. အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး။ J အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး။ 2008; 5: 265-6 ။
Low WY, Tong SF, Tan HM ။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့် hypogonadism နှင့်အမျိုးသားများ၏ဘဝအရည်အသွေး - အာရှအမြင်။ J အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး။ 2008; 5: 282-8 ။
ဗန် Houten ME, Gooren LJ ။ အာရှယောက်ျားနှင့်ကော့ကေးဆပ်လူတို့၏စပ်ကြားမျိုးဆက်ပွားဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်အတွက်ကွာခြားချက်များတစ်ဦးစာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ အာရှ J ကို Androl ။ 2000; 2: 13-20 ။ [PubMed]
Iwamoto T က, Nozawa S က, အာရှယောက်ျား၏ Yoshiike အမ် Semen အရည်အသွေးကို။ Reprod Med Biol ။ 2007; 6: 185-93 ။
Chen က KK, Hsieh က JT, et al Huang က ST, Jiaan DB, လင်း JS ။ Assessment-3: ထိုင်ဝမ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျား၏ကုသမှုထဲမှာပါးစပ် sildenafil ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုတစ်ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်-ထိုးလက်တွေ့စမ်းသပ်။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2001; 13: 221-9 ။ [PubMed]
Tsai YS, လင်း JS, လင်း YM ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူဆီးချိုလူနာအတွက် alprostadil မြုံအမှုန့် (အက်စ်ဖိုး။ , CAVERJECT) ၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ထိရောက်မှု။ EUR Urol ။ 2000; 38: 177-83 ။ [PubMed]
ချင်းမိုင် HS, Wu CC ကို, ဝမ် TC ။ ထိုင်ဝမ်လူနာ penile Prosthesis implantation နှင့်အတူအတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ပေါင်း။ J ကို Urol ။ 2000; 163: 476-80 ။ [PubMed]
မွန်း DG, ပန်းခြံ MG, Lee က SW, ပန်းခြံ K သည်, Park က JK, et al ။ ကိုရီးယား testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့ရောဂါအတွက် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate (Nebido®) ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှု: တစ်ပေါင်းစုံပါအလားအလာလေ့လာမှု။ J ကိုလိင် Med ။ 2010; 7: 2253-60 ။ [PubMed]
McMahon ကို C ကင်မ် SW, Park က NC, Chang က CP, Rivas: D, et al ။ အာရှပစိဖိတ်ဒေသထဲမှာအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ကုသမှု: တစ်အဆင့် III ကိုကို double-မျက်စိကန်း, dapoxetine ၏အပြိုင်-အုပ်စုတစ်စုလေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို။ J ကိုလိင် Med ။ 2010; 7: 256-68 ။ [PubMed]
Siu SC, Lo SK ကို, Wong က KW, IP KM, Wong က YS ။ ဟောင်ကောင်ဆီးချိုလူနာအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့အတွက်အကြောင်းအချက်များနှင့်အန္တရာယ်ပျံ့နှံ့။ ဆီးချိုရောဂါ Med ။ 2001; 18: 732-8 ။ [PubMed]
လျူ CC ကို, Wu WJ, Lee က YC, ဝမ် CJ, Ke HL, et al ။ ထိုင်ဝမ်ယောက်ျားအိုမင်းအတွက်အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့မှုအတွက်အချက်များနှင့်အန္တရာယ်အဆိုပါပျံ့နှံ့။ J ကိုလိင် Med ။ 2009; 6: 936-46 ။ [PubMed]
Wong က SY, ချမ်း, DC, ဟောင်ကောင်တစ်ဦး၏ဝူးဂျေပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့မှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်များဟောင်ကောင်ရှိလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင်။ ဇီဝြဖစ်။ 2006; 55: 1488-94 ။ [PubMed]
အာရှ J ကို Androl ။ 2011 ဇူလိုင်; 13 (4): 605-606 ။
2011 ဇွန်6အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1038 / aja.2010.139
ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်က F Katz, Doron S ကို Stemberနှင့် Harris က M ကို Nagler
တစ်မကြာသေးမီကထုတ်ဝေဆောင်းပါးမှာတော့ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်, ဟို et al ။1 အာရှတိုက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပျံ့နှံ့, စိတ်နေသဘောထားနှင့်ကုသမှုပုံစံများဆန်းစစ်နှင့်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သူတို့နှင့်အတူသူတို့ကိုနှိုငျးယှဉျ။ သူတို့ဟာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED), အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်, နှင့်အာရှလူဦးရေအတွက် hypogonadism မှလေးစားမှုနှင့်အတူအချက်အလက်များ၏ဆွေမျိုးနည်းပါးမီးမောင်းထိုးပြ။ စာရေးသူအာရှတိုက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုခြီးမှမျးကြိုးပမ်းမှုစေသော်လည်း, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပျံ့နှံ့မှုနှုန်း၏အနက်ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်မျိုးစုံအချက်များရှိပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏အနက်ကိုထိခိုက်ရှက်ကြောက်အချက်များအဆိုပါလေ့လာခဲ့အလိုက်, လေ့လာမှုသင်တန်းသားများ, စစ်တမ်းတုံ့ပြန်မှုနှုန်း, ED ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဒေတာများစုဆောင်းခြင်းများအတွက်အချိန်မဟာဗျူဟာများနှင့်အလျား၏အသက်အရွယ်မရွေးဖော်ထုတ်ခြင်း၏နည်းစနစ်များပါဝင်သည်။
အာရှနှင့်မြောက်အမေရိကနှစ်ဦးစလုံးမတူကွဲပြားမြို့ပြနှင့်ကျေးလက်ဒေသလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ကျယ်ပြန့်ကွဲပြားပညာရေးနောက်ခံနဲ့လူမှုစီးပွားရေးအတန်း၏လူဦးရေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောယဉ်ကျေးမှုအချက်များအစီရင်ခံခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ကြီးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး သို့ဖြစ်. နည်းနည်းသံသယ, ရှိပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပညာရေး၏နှုန်းမှာအများအား 35-50 နှစ်ပေါင်းအသက်ယောက်ျား၏ 40% -70% ဖြစ်ခန့်မှန်း.2,3(အာရှဒေတာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့အကြားနှိုင်းယှဉ်ဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းအတော်ကြာကမ္ဘာကြီးလေ့လာမှုများအပါအဝင်) အာရှနိုင်ငံများတွင်ပါဝင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ epidemiological လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်မှာတော့ Lewis ကဖော်ပြခဲ့သည်ပျံ့နှံ့နှုန်းအတွက်ကျယ်ပြန့်အပြောင်းအလဲသရုပ်ပြခဲ့သည်။4 ဥပမာအားထိုင်းနိုင်ငံ, ယောက်ျားကိုရီးယားနှင့် 38 မလေးရှားဘို့% သည်တရုတ်, 20% များအတွက် 15% နှင့်နှိုင်းယှဉ် 2% တစ်ခုခြုံငုံ ED မှုနှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးလေ့လာမှုများခုနှစ်တွင်သို့သော်ပျံ့နှံ့နှုန်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးတက်လာခဲ့သည်။ 7-15 နှစ်ပေါင်းအသက်ယောက်ျားတို့အတွက်% -40% 49 တိုးမြှင်သော 39-49 နှစ်ပေါင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်အာရှလေ့လာမှုများအတွက် 60% -70% ခြုံငုံ ED ပျံ့နှံ့ရှိခဲ့သည်။ မြောက်အမေရိက, လက်တင်နှင့်သြစတြေးလျလူဦးရေအလားတူအသက်အရွယ်-related တိုးခဲ့ရပါတယ်။
ယခုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုရေးသားသူများသည်အာရှနှင့်အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများနှင့် ED ရှိသည့်ဆက်ဆံမှုနှင့်ကုသမှုကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်အာရုံစိုက်သည်။ အာရှအမျိုးသားများသည်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်နေထိုင်သောအမျိုးသားများနှင့်မတူဘဲ 'ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု) ကိုခံစားနေရသည်' ဟုမှတ်ချက်ပြုကြသည်။ ပြောရလျှင်ဤတူညီသောလွှမ်းမိုးမှုများသည်အမျိုးသားများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးတွင်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသတင်းပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ နယူးယောက်စီးတီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရှတိုက်ကြီးတစ်လွှားမှအမျိုးသားများအပါအ ၀ င်အထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူနာများအားစောင့်ရှောက်ရန်အခွင့်ထူးရှိသည်။ အာရှ၌ရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အနောက်တိုင်းဆေးဟုခေါ်သည့်အစားအခြားတိုင်းရင်းဆေးနှင့်ရိုးရာဆေးများကိုသာအဓိကအသုံးပြုသောလူနာများနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည်ဤအစဉ်အလာမဟုတ်သောကုထုံးများကိုရယူနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်းတို့ကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုများကိုမဖော်ပြဘဲအမည်ဝှက်ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရအခြားဆေးဝါးများသည်သက်သေအထောက်အထားများကို အခြေခံ၍ ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသသည့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆေးကျောင်းနှင့်နေထိုင်ခွင့်သင်တန်းကာလအတွင်းအနည်းဆုံးဆွေးနွေးတင်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့်မြောက်အမေရိကသမားတော်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တိုင်းရင်းဆေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာတတ်များနည်းပြီးဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိလေ့ရှိသည်။5 မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ အာရှနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူနာများစွာတို့သည်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုမှီခိုအားထားနေရသည်။ Xu နှင့် Levine ကလူနာများ၏ ၁၁ မှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုသောက်သုံးနေကြသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သူတို့က 'ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုသင်၏လူနာများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုရန်မည်မျှအသုံးဝင်သနည်း' ဟုမေးမြန်းသည့်အခါဆရာဝန်များကပျမ်းမျှအဖြေကို ၂ မှတ်၏ ၅ ချက်မှတ်ဖြင့် ၅ ခုကိုအလွန်အသုံးဝင်သောကုသမှုအဖြစ်ပေးခဲ့သည်။ လူနာများနှင့် 11 'မှာအားလုံးအသုံးဝင်သော' 'အဖြစ်။6 ဆက်လက်အာရှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနဲ့ ပို. ပို. ကွဲပြားခြားနားလူ့အဖွဲ့အစည်းပေးထားကျနော်တို့အနောက်တိုင်းဆေးသမားကအခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးလေးစားခြင်းဖြင့်ပိုမိုကွန်ကရစ်များနှင့်တရားဝင်လေ့ကျင့်ရေးမှအကျိုးနှင့်ဤကုထုံး, ဖြစ်ကောင်း, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုပိုမိုတိကျခိုင်မာစွာအကဲဖြတ်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်နှင့်သင့်ကြောင်းမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ပြန်လည်သုံးသပ်သူများသည်ကုန်ကျစရိတ်၊ ရနိုင်မှု၊ မှတ်တမ်းတင်ထားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပရိုဖိုင်းမရှိခြင်း၊ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောသက်ရောက်မှုများကိုအာရှတွင်နေရာအနှံ့အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအရေးကြီးသောအချက်များအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ အနောက်နိုင်ငံများတွင်၊ အာရှ၌ကဲ့သို့၊ များပြားလှသော 'သဘာဝ' ထုတ်ကုန်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွမှုနှင့်မြင့်မားသောဖွံ့ဖြိုးမှု၏တိုးတက်မှုများဖြစ်သည်။ MacKay, L-arginine, yohimbine ထုတ်ဝေသော Panax ginseng ဟာ, မကာ Ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေးပင်, DHEA နှင့် Tribulus ကုန်း ED ကုသထိရောက်မှုတို့အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။3 စာတမ်း၏စာရေးသူများအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများကိုအခြေခံသည့်စမ်းသပ်မှုများနည်းပါးသော်လည်းကုသမှုသည် penile endothelial တစ်ရှူးများကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သော်လည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့်ရိုးရာဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ပိုမို၍ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုနှင့်သုတေသနပြုလုပ်ရန်လိုအပ်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ သဘောတူညီမှုရှိကြသည်။
အာရှနှင့်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုများအကြားရှိသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးကွာဟမှုသည်အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးကိုရှာဖွေသည့်အမူအကျင့်ကွဲပြားမှုဖြစ်သည်။ ဤကွာခြားချက်များသည်အာရှနွယ်ဖွားအမေရိကန်များအကြား၌ပင်တည်ရှိနေနိုင်သည်။ အာရှအမေရိကန်များအနေဖြင့်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင်မလုံလောက်သောပါဝင်မှုရှိသည်ဟုခံစားရကြောင်း၊ ဆရာ ၀ န်ကသူတို့နှင့်အချိန်အလုံအလောက်မပေးနိုင်ကြောင်း၊ 'ဆရာဝန်များကသူတို့ကိုလေးစားမှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဆက်ဆံရန်' သဘောတူသည်။ ကော့ကေးဆပ်အမေရိကန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။7 အမေရိကရှိတရုတ်ကျောင်းသားများအကြားကျန်းမာရေးယုံကြည်ချက်များကိုစစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အမျိုးသမီးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများကိုရရှိရန်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။ လေ့လာမှုကကျောင်းသားများ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုရယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မိဘများ၏သဘောထားကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ မိခင်များအနေဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများကိုရယူရန်နှင့်သူတို့၏ဖခင်များထက်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ရန်ပိုမိုများပြားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်8 အာရှအမေရိကန်များအကြားကျား, မ၌ဤစိုးရိမ်ဖွယ်ရာကွာဟမှုအာရှတိုက်မှာအာရှတိုက်သားနှင့်ပတ်သက်သည့်လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်၏စာရေးဆရာများအားဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်ကောက်ချက်ကိုထင်ဟပ်။
ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်အာရှအထီးလူနာများ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်နှင့်အပြန်အလှန်လေးစားမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတာ ၀ န်ယူမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သိမြင်နေသောသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်အားနည်းချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာကုထုံးများကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည်လူနာများ၏ရလဒ်များနှင့်လုံခြုံမှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ အာရှပစိဖိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့အာရှတိုက်ရှိအထူးအဖွဲ့အစည်းများမှ ဆက်လက်၍ ကြိုးပမ်းမှုများသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတားမြစ်ချက်များကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာကုထုံးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်အာရှအမျိုးသားများသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေစရာမလိုတော့ပေ။
ဟို CCK, Singam P ကို, ဟောင်ကောင် GE, Zainuddin ZM ။ အာရှတိုက်မှာအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ အာရှ J ကို Androl ။ 2011; 13: 537-542 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Laumann EO, ပိုက်တစ်ဦး, ရို RC ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း။ ဂျေအေအမ်အေ။ 1999; 281: 537-44 ။ [PubMed]
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် Mackay ဃအာဟာရနှင့်ရုက္ခဗေဒ: အသက်သေအထောက်အထားများကိုဆန်းစစ်။ Med ဗျာ 2004 Alternative; 9: 4-16 ။ [PubMed]
Lewis က RW ။ ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအာရှအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကူးစက်ရောဂါ။ အာရှ J ကို Androl ။ 2010; 13: 152-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Berman BM, Singh BK၊ လာအို၊ Singh BB, Ferentz KS, et al ။ ဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးအပေါ်ဆေးသမားများ၏သဘောထား - ဒေသဆိုင်ရာစစ်တမ်း။ J ကို Am ဘုတ်အဖွဲ့ Fam Pract ။ 1995; 8: 361-6 ။ [PubMed]
Xu S, Levine M. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနေထိုင်သူများနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအပေါ်ကျောင်းသားများ၏သဘောထား - စမ်းသပ်လေ့လာမှုတစ်ခု။ J ကို Clin Pharmacol ။ 2008; 15: e1-4 ။ [PubMed]
ဂျွန်ဆင် RL, Saha S က, Arbelaez JJ, သဲသောင်ပြင် MC, Cooper က LA က။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဘက်လိုက်မှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းကို၏လူနာသဘောထားအမြင်အတွက်လူမျိုးရေးနှင့်တိုင်းရင်းသားကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီး International Med ။ 2004; 19: 101-10 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အမေရိကန်တရုတ်ကျောင်းသားလူဦးရေအတွက်လိင်, အာမခံ status ကိုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသဘောထားများနှင့်ကျန်းမာရေးအမူအကျင့်များ ray-Mazumder အက်စ်အခန်းက္ပ။ Ethn ကနျြးမာရေး။ 2001; 6: 197-209 ။ [PubMed]